[MMAnime] Dr. Stone : Dr. Stone
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း- (Crd)Senku နဲ့ Taiju ဟာငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Senku ဟာသိပ္ပံပညာကိုအလွန်ဝါသနာပါပြီး ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ပါ။ Taiju ကတော့သာမန်လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီး Senku လိုတော့ဉာဏ်မကောင်းပါဘူး။တနေ့မှာ Taiju ဟာငယ်ငယ်ထဲက တဖက်သတ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးကိုဖွင့်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဖွင့်ပြောဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ ရုတ်တရက် ထူးဆန်းတဲ့အလင်းရောင်တခုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ လူသားအားလုံးကျောက်ရုပ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကျော်ခန့်အကြာမှာ Taiju ဟာနိုးထလာခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Senku ကသူထက် နှစ်ဝက်ခန့်ကြိုပြီးစောနိုးနေတာတွေ့ရတဲ့အခါသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး သူတို့ဘယ်လိုနိုးထခဲ့ ကြလဲ? အခြားနိုးထနေတဲ့လူတွေကောရှိဦးမလား? အခြားလူတွေကိုကော ဘယ်လိုနိုးထအောင်လုပ်ရမလဲ? ဆိုတာကို Senku ရဲ့သိပ္ပံဗဟုသုတတွေသုံးပြီး ကျောက်ရုပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Stone world ကြီးမှာ အသက်ရှင်ရုန်းကန်ကြရမှာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ anime က sci-fi အမျိုးအစား anime ဖြစ်လို့သိပ္ပံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အချက်အလတ်တွေဗဟုသုတ တွေအများကြီးပါပါတယ်။ Genere မှာ comedy မပါပေမဲ့ Comedy ခန်းတွေလဲပါမှာမို့ ကြည့်ရှုကြပါဦး
1Episode 27 / 720p Mediafire
1Episode 27 / 720p WATCH
1Episode 28 / 720p Mediafire
1Episode 28 / 720p WATCH
1Episode 29 / 720p Mediafire
1Episode 29 / 720p WATCH
1Episode 30 / 720p Mediafire
1Episode 30 / 720p WATCH
1Episode 31 / 720p Mediafire
1Episode 31 / 720p WATCH
1Episode 32 / 720p Mediafire
1Episode 32 / 720p WATCH